calendar 2013 “Farm” Ny Kalandrie - Famolavolana
Zoma 26 Febroary 2021
Ny Kalandrie Ny toeram-piompiana dia alimanaka biby an-trano kitset. Nivarina tanteraka izy io ka mahatonga ny toeram-pambolena jiro kely mahafinaritra feno miaraka amin'ny biby enina hafa. Fiainana miaraka amina endrika: Ny endrika manara-penitra dia manam-pahefana hanova ny habaka sy hanova ny sain'ireo mpampiasa azy. Manome fampiononana amin'ny fahitana, mitazona ary mampiasa izy ireo. Mihena izy ireo ary singa manaitra, manatsara toerana. Ny vokatra tany am-boalohany dia natao tamin'ny fampiasana ny foto-kevitra ny "Fiainana miaraka amina endrika".
Anaran'ny tetikasa : calendar 2013 “Farm”, Anaran'ny mpamorona : Katsumi Tamura, Anaran'ny mpanjifa : good morning inc..
Alarobia 24 Febroary 2021
Electra Faucets Zoma 26 Febroary
Osoro Ny Rafi-Panokatra Misokatra Alakamisy 25 Febroary
Coca-Cola Tet 2014 Karazana Fonosana Malefaka Alarobia 24 Febroary
Novambra 2020 (90)
Fanadihadihana famolavolana ny andro Zoma 26 Febroary
Tantara momba ny andro Alakamisy 25 Febroary
Famolavolana ny andro Alarobia 24 Febroary
Mpamorona ny andro Talata 23 Febroary
Ekipa mpamorona ny andro Alatsinainy 22 Febroary
Ny Kalandrie Katsumi Tamura calendar 2013 “Farm”